1 Nereza For Men
2 Nereza For Men
3 Nereza For Men
4 Nereza For Men
5 Nereza For Men
6 Nereza For Men
1 Nereza Kune Vakadzi
2 blade YeVakadzi
3 Nereza Kune Vakadzi
4 Nereza Kune Vakadzi
5 Nereza For Women
JIALI Razor kuAmsterdam Online "Nyika Yeyakavanzika Label"
Kubva 1 Zvita kusvika 2rd Zvita, 2020, JIALI Razor inopinda muAmsterdam Online "World of Private Label" Jiali reza ndiyo China main razor inogadzira uye mutengesi mukuru, muridzi wevanopfuura mazana matatu evashandi, uye unopa mareza kune nyika dzinopfuura makumi manomwe. Izvo zvigadzirwa zvinosanganisira imwe / mapatya / katatu / mana / mashanu / matanhatu ...
Iwo maRazors eKuchenesa, Kuvhara Shave
hapana mhinduro chaiyo, Kana uchifunga kuti ndeipi yakanakisa reza, Izvo zvinoenderana nezvaunoda iwe kana dhizaini yechiso. Isu tinokubatsira iwe kusarudza kuburikidza neakasiyana machira. Pane mhando ina dzakakura dzemapanga: dzakatwasuka, chengetedzo, machira echinyorwa nemagetsi. Saka - ndeupi ari nani. yo ...
Nei uchiveura ndebvu?
Muhupenyu hwevarume hwezuva nezuva, kazhinji kune nzira mbiri dzekuveura kubatsira kubvisa bvudzi kumeso. Imwe ndeyekugera kwetsika, imwe kuveura magetsi. Ndezvipi zvakanakira kuveura ndebvu maringe nekuveura magetsi? Uye chii chakanakira iko kuveura kwakanyorova kana isu tinoti iko kuveura kwebhuku. L ...
Kuveura matipi evakadzi
Kana uchiveura makumbo, underarms kana bikini nzvimbo, kunyorova kwakakodzera idanho rekutanga rakakosha. Usamboveura ndebvu usati watanga kunyorova bvudzi rakaoma nemvura, sezvo bvudzi rakaoma rinonetsa kucheka nekutyora mupendero wakanaka wereza. Nhare inopinza yakakosha pakuwana pedyo, kugadzikana, kutsamwa -...
Kuveura ndebvu mumakore
ne admin pane 20-11-09
Kana iwe uchifunga kuti kurwira kwevarume kubvisa bvudzi kumeso ndekwechimanje manje, tine nhau kwauri. Pane humbowo hwekuchera matongo hwekuti, muLate Stone Age, varume vakaveurwa nedombo, obsidian, kana clamshell shards, kana kunyange akashandisa maclamshells kunge tweezers. (Ouch.) Gare gare, varume vakaedza nendarira, mupurisa ...
Matanho mashanu ekuveura kukuru
Kwokuveura ndebvu kwepedyo, kwakanaka, ingo tevera mashoma anokosha matanho. Nhanho 1: Geza sipo inodziya uye mvura ichabvisa maoiri kubva kubvudzi rako uye ganda, uye ichatanga iyo yekudzikisira whisker (zvirinani zvakadaro, shave mushure mekugezesa, kana bvudzi rako razara). Nhanho 2: Nyorovesa kumeso bvudzi mamwe e ...
INFO YEMAHARA KAPUKA TYPES MUKURU Misika
ne admin pane 21-02-20
Zvigadzirwa zvekuchengetedza zvevanhu zvinogara zvichidyiwa zuva nezuva uye reza sezvo FMCG ingori imwe chete mhando yavo, QTY yayo yevatengi yakakura kwazvo sezvo chiri chimwe chezvinyorwa zvinodiwa zvekushandisa zuva nezuva uye akasiyana mapakeji ari kunyanya pakutengesa mumisika mikuru seSouth America, North America, Europe uye Middle East, F ...
Nzira Yekutarisira Yako Inoraswa Razor
Nhare dzakanaka uye avhareji yemhando yemareza inogona kupedzisa kuveura, asi avhareji emhando yemareza anoshandisa nguva yakawanda, mashandiro acho haana kuchena, asi anorwadza. Izvo zvishoma zvisina hanya pamusoro pekubuda ropa, zvakakomba uye zvakaputsika pachiso chako, neakashata mashizha. Varume vanga vachiveura t ...
Nei vanhu vachida reza inoraswa?
ply shaving cream, tora badza uye shave. Kunaka uye kunonoka, Izuva rakanaka uye rinonakidza kutanga pano. Vamwe vanhu vanogona kusahadzika kuti sei murume achiri kushandisa reza inoraswa kunyangwe paine shavers zhinji dzemagetsi. Ehe vanhu vanofarira reza inoraswa, Ngatitaurei nezve nei? ...
Razor Iyo Yakagadzirwa kubva kuna Bamboo fiber Chinyorwa
With anopfuura makore makumi matatu enhoroondo, Ningbo jiali akaedza vomurova zvakawanda zvakatipoteredza-ushamwari zvigadzirwa zvinobatsira kuderedza kusvibiswa kwezvakatipoteredza. Nekuzvipira kwakasimba mukutarisira nharaunda nharaunda inokonzerwa nekurasa kwemazuva ese, makambani mazhinji akavandudza nharaunda-fri ...
Ungasarudza sei reza rinoraswa chairo?
Kune marudzi embeu mumusika, rimwe chete reza kusvika kumatanhatu reza reza, classic reza yekuvhura kumashure reza reza. Tinga sarudza sei reza chaiyo kwatiri? A, Sarudza yako ndebvu mhando a.Siparadzanisa ndebvu kana shoma muviri bvudzi. -Sarudza 1 kana 2 reza reza b.Soft uye dzimwe ndebvu & ...
Shanghai Yepasi Pese Kushambidza & Kuchengeta Zvigadzirwa Expo 2020
Yekutanga isingaenzaniswi kurongeka yatakapinda yaive yakabata mushanghai pa7 - 9th Aug kubvira iyo COVID -19. Bhizinesi repasi rese rinowedzera kutya sezvo pasina munhu anoziva zvichaitika mune ramangwana, asi vamwe vatengi vanozvifunga semukana. saka Zvinouya nefairs yemabhazi ...
Kwete 77 ChangYang Road, JiangBei Dunhu, Ningbo, China